Moments Neshamwari 38
Chii Chinodiwa Mukudya?
Kuvira ndiko basa rechimiro chemuviri kunyoresa kukosha uye hunhu mune zvinwiwa uye zvinwiwa. Iko hakuna kuravira mukudya kusvikira mvura yarondedzera chikafu neririmi. Pakangosvika mvura, unyoro, svutugadzike, yaunza chikafu muhukama nerurimi, iyo nhengo yekuravira, tsoko dzerurimi pakarepo dzinotungamira kune chimiro chemuviri zvimiro zvechikafu. Pasina mvura yekuita hukama pakati pekudya nemitsipa yerurimi, tsinga dzinotadza kuburitsa zvinoonekwa nezvechikafu kumuviri wemuviri uye fomu remuviri harigone kuita basa raro rekuravira.
Kune hukama hwakavanzika pakati pemitumbi ine hunhu hwekuravira, nerves uye fomu yemuviri, uye nemvura. Ukama hwakavanzika chibvumirano chinoita kuti iwo maviri zvikamu zve hydrogen uye chikamu chimwe cheoksijini chiite icho chatinodaidza mvura, iyo yakasiyana nechero chimiro che hydrogen kana oksijeni iyo mvura yakaumbwa. Kune mvura mune imwe tunhu yezvokudya. Chisungo chinobatanidza magasi maviri aya kuburitsa mvura chisungo chimwechete chakavanzika chinobatanidza chikafu, nzungu dziri parimi, mvura, uye muviri fomu.
Ipo pacho mvura yemuviri painosangana nechidimbu chechikafu parurimi, chinhu chakajairika mumvura chiripo uye chichiita kamwechete pane fomu yemuviri, kana tsoko dzeirimi dzakasimba. Chinhu chakavanzika mumvura chinobatanidza chikafu neririmi chakafanana mumvura uye mune chikafu nechirimi nerve. Icho chinhu chakavanzika ndicho chaicho, iyo yemidzimu chinhu chemvura. Mvura yatinoziva inongova kwekunze kutaura uye kuratidzwa kwemanomano echidhimoni chinhu chemvura. Mvura iyi isingaoneki ndiyo inomisidzana nemuviri wayo chimiro.
Kuvira ibasa mune ino fomu muviri wekutora mukati mayo kuburikidza neayo yemashiripiti element yemvura zvinyorwa kana hunhu huri mune chikafu. Kuvira ibasa remuviri fomu, asi harisi iro roga basa. Kuvira ndeimwe yemanzwiro. Iyo muviri fomu ndiyo chigaro chekunzwa kwese. Iyo fomu fomu inonyoresa zvese sensations. Kushungurudzika kunoitika kumurume kuburikidza chete nemuviri fomu. Iyo fomu yemuviri inobatanidza pfungwa imwe neimwe kune imwe. Chinangwa chemanzwiro ndechekuti imwe neimwe inofanirwa kubatsira mukunaka kwemuviri, kuti muviri uve chinhu chakakodzera kushandiswa nekuvandudza pfungwa. Chinangwa chekuravira ndechekuti nazvo fomu muviri unogona kunyoresa manzwi anogadzirwa nechikafu kuti agone kusiyanisa pakati pavo uye arambe chikafu chakadai sezvisina basa uye nekukuvara, uye sarudza chete izvo zvakanyanya kukodzera kushandiswa kwepfungwa. pakuvaka uye kuchengetedza chimiro chemuviri uye fomu yemuviri.
Ravira yaigona kutungamira varume nedzimwe mhuka kuti ndedzipi chikafu chinonyanya kudikanwa uye chakabatsira muviri, kana varume nemhuka dziya vaigara mune zvakajairwa uye zvakasikwa. Asi vanhu havasi ivo vakajairwa uye vakasikwa, uye kwete mhuka dzese, nekuda kwesimba rakaunzwa uye rakaunzwa nevanhu kutakura.
Pfungwa yekunhuhwirira yakatomboenderana nezvekudya uye kuravira kupfuura chero humwe hwekunzwa nekuti kunhuhwirira kunofanira kuita zvakananga uye kunoenderana nechinhu chemuviri, uye chikafu chinogadzirwa nezvinhu zvinopinda mukuumbwa kwechinhu chemuviri.
Anononoka mukudya chero kukosha sekudya kunze kwekudya here?
Inayo. Chikafu chakakora chinopa hutano mumuviri. Chinhu chakavanzika chemashiripiti, mvura, ichingotaurwa nezvayo, kunopa muviri muviri fomu. Iko kuravira kwechinhu icho chemashura kunopa chikafu kune chetatu chinhu icho chiri mukati uye kuburikidza nechimiro chemuviri. Mune munhu, ichi chechitatu chimwe chinhu chisati chiri chimiro, kunyangwe icho chinoratidzwa mumhando dzakasarudzika nemhando dzemhuka. Ichi chechitatu chimwe chinhu chinowana zvinovaka mukati memunhu kubva kuravira mukudya kuchiva. Chishuwo chinosvika mukati memanzwiro uye chakavashandisa kukwezva mukati medzo kugutsikana kunzwisiswa kwese kunzwisiswa. Pfungwa imwe neimwe saka inoshumira kune chishuwo. Nekudaro, iyo pfungwa yakakosha inoenderana nechishuwo, uye iyo inoshuvira inoshandisa kuzvienzanisa nedzimwe pfungwa, kubata kana kunzwa. Saka kuchiva kunozvibata kuburikidza nekubata kuravira, uye inodhonza nepfungwa yekuravira a1l mafaro ayo ayo anogona kuwana kubva kuzvikafu kuburikidza nekuravira. Dai chimiro chemuviri chaibvumidzwa kuita basa raro rekuravira pasina kuteerera zvaishuvira, chaizongo sarudza chete chikafu chakadai sezvo chichifanira kuchengetedza chimiro chayo uye maumbirwo enyama. Asi iyo fomu fomu haibvumidzwe kusarudza chikafu chinonyanya kudikanwa. Iyo Chido inotonga iyo fomu yemuviri uye inoshandisa iyo kuona iko kugutsikana kwemanzwiro iyo yaisingakwanise kuwana pasina fomu yemuviri. Iko kuravira kunonyanya kufadza chishuwo, chishuwo chinoda kuburikidza nemuviri muviri, uye murume, akanyengerwa mukutenda kuti chishuwo iye amene, anogamuchira zvakanogoneka seanokwanisa kugovera nezvakadai zvekudya sezvaanenge achida zvisina musoro kuburikidza nekuravira. Saka iko kuravira kunodyarwa kugutsa chishuwo, chisinga fungi mhuka, iyo iri chikamu chekugadzira kwemunhu. Nekupa izvo zvinodiwa zvechido kuburikidza nekuravira chikafu chinoendeswa mumuviri icho chinokuvadza pakuchengetwa kwayo, uye nekufamba kwenguva mamiriro ayo akajairika anovhiringidzwa uye kurwara kwehutano. Nzara haifanirwe kuvhiringidzwa nekuravira. Nzara kushuvira kwechisikwa kwemhuka kugutsa zvido zvayo. Kuvira kunofanira kuve nzira iyo mhuka inogona kusarudza chikafu chinodiwa pakuchengeta kwayo. Iyi mhuka iri musango, uye kure nekumanikidzwa kwemunhu, ichaita. Mhuka iri mumunhu, munhu anowanzovhiringidza uye obve azvizivisa kwaari. Mukati menguva yekuravira kwezvekudya zvakasimwa. Chido kana mhuka iri mumunhu yakapihwa chikafu zvinochengeterwa mukudya, uye mhuka yacho inoputsa fomu yemuviri uye ichidzivirira kubva mukuita mabasa ayo echisikigo mukuchengetedza hutano hwemuviri zvizere uye mukushanda sevhavha yehupenyu iyo munhu angadaidza kuti ishandiswe pabasa rake munyika.
Kuvira kune kukosha kunze kwechikafu. Ukoshi hwayo ndewekukudza icho chishuwo, asi kuzvipa chete izvo zvinovaka izvo zvahunoda, uye kwete kuwedzera simba rayo kupfuura izvo izvo muviri unokwanisa kubereka.